"Nwatakịrị nwanyị nọ n'ụgbọ okporo ígwè", site n'aka Paula Hawkings, akwụkwọ edemede nke oge a | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Eva Maria Rodriguez | | Akwụkwọ, Novela, Black akwụkwọ
Ọ bụrụ na ị ka na-achọ akwụkwọ maka ezumike a, ị nwere ike ịtụle nke dị na egbugbere ọnụ mmadụ niile n'oge na-adịbeghị anya. Ọ bụ ihe Nwa agbọghọ na ụgbọ oloko, na Paula egbe. Nwa agbọghọ na ụgbọ oloko were ihe kacha mkpa ihe omuma nke uche site na akụkọ ọsọ ọsọ na-ejide onye na-agụ ya na ibe mbụ.
Nwa agbọghọ na ụgbọ oloko O rereworị ihe karịrị nde asaa n'ụwa niile wee nọrọ na New York Times ọkwa maka izu 20 kemgbe ewepụtara ya na Bekee na Jenụwarị afọ a. Stephen King n’onwe ya toro akwụkwọ a, nke edepụtara n’asụsụ Spanish site Uwa ọ dịkwa n’ebe a na-ere akwụkwọ kemgbe mmalite ọnwa Jun. Lọ ọrụ mmiri Ọ zụtala ikike ịgba ihe nkiri ahụ.
Dị ka onye edemede ahụ n'onwe ya si kwuo, Nwa agbọghọ na ụgbọ oloko O sitere na njem ọ na-eme kwa ụbọchị na etiti London. N'oge ụfọdụ njem m na-agafe n'ezie n'ebe ụfọdụ ndị mmadụ nọ. Ọ bụ ebe ahụ ka ọ hụrụ onwe ya na-elegharị anya n'ime ụlọ iji chee etu ndụ ha dị wee malite iche echiche banyere mmeghachi omume ya ga-abụ ma ọ hụ ihe na-awụ akpata oyi n'ahụ.
Nkọwa maka "Nwa agbọghọ nọ n'ụgbọ okporo ígwè"
Otu nwa agbọghọ dị afọ 30 nọ n'ọgba aghara dị adị na-ahụ ihe omimi dị omimi na otu n'ime njem ụgbọ oloko ya. Onye protagonist ga-enwe igodo iji dozie okwu dị omimi mana ọ ga-aghọrọ ụzọ ọzọ iji mee ya.
Onye protagonist nke Nwa agbọghọ na ụgbọ oloko bụ Rachel, nwanyị a alcoụrụma a gbara alụkwaghịm, nke si n'ụgbọ okporo ígwè London na-ekiri di na nwunye yiri ka ha nwere obi ụtọ na ndụ ọ ga-esonye. Akụkọ a na-ewere echiche dị iche iche, na-anwa ịgbagha onye na-agụ ya ma na-egwu egwu na nghọta ya.
Rachel na-ewekarị ụgbọ okporo ígwè 8.04:XNUMX nke ụtụtụ. Kwa ụtụtụ otu: otu ala, otu ụlọ ... na otu nkwụsị na mgbaàmà uhie. Ha bụ naanị obere sekọnd, mana ha na-enye gị ohere ihu otu di na nwunye na-eri nri ụtụtụ nwayọ nwayọ na mbara ala ha. Ọ dị ya ka ọ maara ha ma mepụta aha maka ha: Jess na Jason. Ndụ ya zuru oke, ọ bụghị dị ka nke ya. Mana otu ụbọchị ọ hụrụ ihe. Ọ na-eme ngwa ngwa, mana o zuru. Ọ bụrụkwanụ na Jess na Jason enweghị obi ụtọ dị ka o chere na ha nwere? Gịnị ma ọ bụrụ na ọ dịghị ihe ọ dị ka ọ dị?
I nwere ike ịgụ isi nke mbụ nke Nwa agbọghọ na ụgbọ oloko ebe a
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Akwụkwọ » "The Girl on the Train", nke Paula Hawkings dere, akwụkwọ edemede nke oge anwụ a